Rubric: Mutemo weMitemo
Ndeapi mabasa uye kodzero dzevanoongorora sarudzo muRussian Federation? Kuti utarise. . Tora mhino dzako .. Vanovhota ... Mucherechedzi ane kodzero: -kuti uzive mazita evavhoti; -kuve munharaunda yekuvhota sarudzo dzakakodzera ...
Kune nyaya dzehurumende chete yeRussian Federation inoshanda? Mwari wangu, iwe unonzwisisei Ishe ... Zvakanaka, zvakanyanya kuoma kusvika pabhuku uye kuparadzanisa vane gumi paMutemo weRussian Federation here? Chinyorwa 71 cheMutemo ...
Mutungamiri ndiye mutongi webumbiro remitemo here? Hongu Maererano neMutemo, hongu! Chitsauko 4. Mutungamiri weRussia Federation Article 80 1. Mutungamiri weRussia Federation ndiye mutungamiriri wehurumende. 2. Mutungamiri weRussian Federation ndiye mutongi weMitemo yeRussian Federation, ...
Muzviitiko zvipi zvinotungamirirwa neMutungamiri weRussian Federation ane kodzero yepamutemo yekupedza State Duma? Muchiitiko ichi zviri nani kushandisa shanduko yekutanga. Ngatishandirei kuMutemo weRussia Federation 1. Hurumende Duma inogona kuputswa neMutungamiri we ...
zvinonzwisisika uye zvakananga-kutonga kwemutemo wemavara X.NUMX Article 4 yeMutemo weRussian Federation? Mitemo yeRussian Federation haigoni kupesana nemitemo inozivikanwa munyika yose yemitemo yenyika. Kana zvisina kudaro, hazvina kunaka 15. Kazhinji vanoziva mazano nemitemo mukati. kodzero, ...
Nhamba yezvinyorwa zvakasarudzwa neMutungamiri weRussia Federation Article 83 yeMutemo weRussia Federation Mutungamiri weRussia Federation: a) anogadza, nemvumo yeHurumende Duma, Sachigaro weHurumende yeRussian Federation; d) inomirira State Duma ...
Simba reMutemo. isu tine Federal Federal. Ndeipi mamwe mibvunzo ichavapo?) MuRussia, simba rekutonga rinomiririrwa neBicameral Federal Assembly, inosanganisira State Duma uye Federation Federation, munzvimbo ...
Chinyorwa 49 kuti nyaya inonzi Constitution of the Russian Federation Art. 49 Kufungidzirwa kwekusachena; AIC RF art. 49 Kushandura nheyo kana nyaya dzekutaura, kushandura ukuru hwekutsvaga, kuramba kwekuita, kubvuma kwekutsvaga, nyika ...
Rondedzera zvikamu zvehurongwa hwekusarudzwa, nekutsanangurwa kwemunhu mumwe nomumwe Sarudzo yekutarirwa inotungamirirwa nemutemo wehutano hwekusangana nekuita sarudzo. Iyo inoumbwa nezvikamu zvakasununguka zvitsvene, izvo zvinopesana kubva kune mumwe nemumwe mumabasa, akapoteredza ...
Mhando mikuru yekodzero uye rusununguko rwevanhu uye vagari vemo. Ndibatsire kuti ndiwane mhinduro. Umunhu, hupfumi, zvematongerwo enyika, hupfumi Kodzero uye rusununguko rwevanhu uye vagari vomunharaunda zvakakamurwa kuva zvinyorwa (inalienable), zvinyorwa (constitutional) uye zvepasi rose zvakazivikanwa ...
Ko mutengi anogona kudzorera chipo chechipo kune chechi? Shanduro yekodhi yemari, zvisinei, haisi kushanda. Chipo chechipiro chigwaro chinosimbisa sangano rinosungirwa kutumira kune mutakuri zvigadzirwa zvaro zvakakwana zvakaenzana ne ...
Zvino yakabviswa JSC neCJSC. Pane kudaro, OA yakaonekwa. Ichokwadi ndechokuti huwandu hwehuwandu hweOJSC, pasinei nehuwandu hwehutano uye hwomutemo, hwemazuva ose hwakanga huri hurumende dzisiri dzevanhu. Havaiti ...
Mibvunzo ye77 mu database yakagadzirwa mu 0,657 masekondi.